YekuEurope Yekutanga Yakazara Autonomous Robotaxi Service Yakatangwa MuNetherlands
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » YekuEurope Yekutanga Yakazara Autonomous Robotaxi Service Yakatangwa MuNetherlands
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kumhanyisa Mota • Netherlands Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Yuropu yekutanga yakazvimiririra yakazara robotaxi sevhisi yakatangwa muNetherlands
Robotaxi igwa remagetsi rinozvimiririra iro rine simba rezuva uye rinogona kurumbidzwa neapp yekukwira.
US Buffalo Automation yatanga chinyararire kuEuropean yekutanga yekutengesa robotaxi sevhisi.
Iyo robotaxi sevhisi ndiyo yekutanga yerudzi rwayo kumativi mazhinji.
Kuvhurwa kunovhura musuwo wemaguta ari muEU kutora nzira iyi yekuvhuna-pwanya imwe nzira yekufambisa.
Buffalo kushandisa michina, yekuvanzika kambani yekuAmerica yekuchenjera kambani, uye Ramangwana Mobility Network, weEuropean imwe nzira yekufambisa, akatanga chirongwa chekutanga cheEuropean robotaxi muNetherlands. Kuvhurwa kunovhura musuwo wemaguta ari muEU kutora nzira iyi yekuvhuna-pwanya imwe nzira yekufambisa.
Iyo robotaxi sevhisi ndiyo yekutanga yerudzi rwayo kumativi mazhinji. Icho chikepe chakazvimiririra chemagetsi chine simba rezuva uye chinogona kurumbidzwa neapp yekukwirisa, asi zvinonyanya kukosha, iri kutengeswa - parizvino yakatakura vafambi mune yakaoma dura reEurope. Kuvhurwa kwaita imwe nzira yekushandisa yakagovaniswa yekuwana yakazvimiririra magetsi emagetsi senzira inodhura uye inodzivirira nharaunda.
Iyo ngarava sevhisi inonzi "Vaar akasangana Ferry" inotsigirwa neDutch hurumende yehurumende uye ichave isingabhadharwe vagari kusvika muna Gumiguru 2021. Warmond-Kagerzoom, Leiderdorp nenzvimbo yegorofu iri padyo izvozvi zvine hukama huri nani, kunyanya kune vanofamba mabhasikoro nevanofamba netsoka, kunzvimbo yekuvaraidza yeKoudenhoorn.
"Kubva pakavambwa, zvinangwa zveBuffalo Automation zvave zvekuvandudza kuchengetedzwa uye kugadzirisa mvura kuburikidza nekushandisa tekinoroji," anotsanangura kudaro CEO Thiru Vikram. “Chirongwa ichi chakaitwa kuti chikwanisike nekuda kwevanhu vemunharaunda pamwe nevatungamiriri vemabhizimusi avo vakasununguka kutsvaga dzimwe nzira dzekutakura. Ichi chiitiko chakakosha chinosimbisa kuzvipira kwedu kupa vanhu vekuSouth Holland yakachengeteka, yakachena simba nzira dzekufambisa dzinodzivirira yavo yakawanda blueways uye zviwanikwa zviwanikwa. Kutanga basa iri remagetsi robotaxi, iro rinofambiswa nehunyanzvi hwedu hweGreycraft, parwizi rweEurope chave chiri chiitiko chinonakidza chevashandi vedu vemumunda. "Tinofara kuti vakuru veDutch pamwe nevanhu veFMN uye NGS vanogovana chiono chedu uye tinotarisira kumisikidzwa kwakadzama padziva."
Municipality yeTeylingen, South Holland's Alderman Heleen Hooij, shasha ye green technology, anofarira nezve mabhenefiti echikepe ichi. "Zvakakosha kuti masipala weTeylingen ane scoop: chikepe chinozvifambisa woga!" anoti. “Zvakanaka kuti tinokwanisa kushandisa basa rekuvandudza zvikepe, rakarongwa nekuitwa nemumwe wevagari vedu, mwaka uno wezhizha. Uye zvinonakidza kuti vadzidzi vanobva kuDelft pa de Groote Sloot vanogona kuwana nzvimbo yekudzidza yemapurojekiti avo. Ndinodada kwazvo kuti ngarava iyi ichaendesa vanofamba netsoka nemabhasikoro sechirongwa chekutyaira. "Kana zvikazoonekwa kuti chikepe chakabudirira, chinogona kubatsira kuti vanhu vagone kupinda munzvimbo dzinotandarira dzeKagerzoom neKoudenhoorn."
Kugovana mukana kune wega-kutyaira chikepe chemagetsi ipfungwa yepamoyo mukuzvipira kweBuffalo Automation kuona kuti chikepe hachiwanzoitirwa kune vepamusoro-soro - zvinounza mararamiro eachting kuvanhu, kutakura demokrasi kutakura zvisinei nedanho remunhu rekufamba hunyanzvi kana kugona kwemari kuve nemotokari, uku uchichengetedza nharaunda.
Anne Koning, Provincial Executive weSouth Holland: “Nekuda kwematanho ekudzivirira chirwere chinonzi coronavirus, tiri kuramba tichienda munyika medu. Nekuda kweizvozvo, iyo yekuvaraidza kumanikidza munzvimbo dzegirinhi yakawedzera zvakanyanya. Nemubhadharo wemari kubva kudunhu reSouth Holland, tiri kuona kubatana kwakanyanya kuchitsuwa cheKoudenhoorn. "Aya ndiwo marariro atinotarisira kuti vashanyi vapararire zvirinani, uye tichava nechokwadi chekuti vanovaraidza vanogonawo kuchengetedzeka mwaka uno wezhizha kunakidzwa nenzvimbo ino yakanaka."